2021ခုနှစ်ရဲ့ koreaအနုပညာရှင်များ၏ ဝင်ငွေအများဆုံး YouTube channel 15ခုကို Forbesမှထုတ်ပြန် - ONE DAILY MEDIA
2021ခုနှစ်ရဲ့ koreaအနုပညာရှင်များ၏ ဝင်ငွေအများဆုံး YouTube channel 15ခုကို Forbesမှထုတ်ပြန်
Forbes Koreaမှ 2021ခုနှစ်ရဲ့ ဝင်ငွေအများဆုံး YouTube channel 15ခုကို ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ။ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ကိုယ့်idolလေးတွေ YouTubeကနေ ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲ ကြည့်ကြရအောင်။
NCT NCTအဖွဲ့ရဲ့ YouTube Channelဖြစ်တဲ့ NCTသည် Subscribers 4.22သန်းကို။ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Video 224ပုဒ်တင်ထားပြီး စုစုပေါင်းကြည့်ရှုသူ 281.9သန်း ရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် ဝမ်သန်းပေါင်း 364သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 313,000)ဝင်ငွေရရှ်ိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
14.AKMU AKMUရဲ့ YouTube Channel AKMUမှာ Subscribers 2.54သန်း ၊video 147ပုဒ်နှင့် စုစုပေါင်း ကြည့်ရှုမှု 632.4သန်း ရရှိထားပါတယ်။ Forbesမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ AKMU Channelသည် ဝင်ငွေ ဝမ်သန်းပေါင်း 374သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 322,000)သန်းရရှ်ိကြောင်း သိရသည်။
13. Channel NCT Daily NCTရဲ့ Channel NCT Dailyမှာလည်း 4.21သန်း Subscribers၊ video 467ပုဒ်တင်ထားပြီး ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 729.5သန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ၎င်းchannelရဲ့ ယခုနှစ်ဝင်ငွေကတော့ ကိုရီးယားဝမ် 501သန်း (ကန်ဒေါ်လာ 431,000)ဖြစ်ပါတယ်။
12.loonatheworld LOONAရဲ့ Channel (loonatheworld)ကတော့ 1.61သန်း subscribers၊ video 1,025ပုဒ် ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 588.7သန်းရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် ဝမ်သန်းပေါင်း 782သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 672,000)ရရှိကြောင်း Forbes ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်
11.Red Velvet Red Velvetအဖွဲ့ရဲ့ Channelဖြစ်တဲ့Red Velvetကလည်း Subscribers 4.41သန်း၊video 144ပုဒ်နှင့် 616.9သန်း viewကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး 782သန်းဝမ် (ကန်ဒေါ်လာ 673.000)ရရှိပါတယ်
။10.TOMORROW × TOGETHER OFFICIAL TXTရဲ့ Channelဖြစ်တဲ့ TOMORROW×TOGETHER OFFICIAL Channelဟာ Subscribers 7.53သန်း၊video 752ပုဒ်ကို ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 465.2သန်းရရှိထားပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ကိုရီးယားဝမ် 1.14ဘီလီယမ် (ကန်ဒေါ်လာ 981,000)ရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
9.aespa Aespaရဲ့ Channelဖြစ်တဲ့ aespaမှလည် subscriber 2.34သန်း၊ video60,ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 281.1သန်းနဲ့ ဝင်ငွေ ဝမ်1.44ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 1.24သန်း)ရရှ်ကြောင်း သိရတယ်။
8.IU OFFICIAL IUရဲ့ YouTube channel (IU OFFICIAL)မှာလည်း subscribers6.69သန်း၊video 125နှင့် ကြည့်ရှုမှုပေါင်း950.8သန်းနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း ကိုရီးယားဝမ် 1.56ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 1.34သန်း)ရရှိကြောင်း ‌Forbesမှာ ဖော်ပြထားသည်။
7.EXO EXO YouTube channelမှာ Subscribers 8.3သန်း၊video 199ပုဒ် ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 471.3သန်းနှင့် တစ်နှစ်အတွင်း ဝမ်1.69ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 1.45သန်း)ရရှိကြောင်း သိရတယ်။
6.MAMAMOO MAMAMOO Channelဟာလည်း Subscribers6.07သန်း ၊vidoe 604ပုဒ်၊ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 1.632ဘီလီယံနှင့် ယခုနှစ်တွင် ဝမ်1.69ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 1.45သန်း)ရရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
5.BamBam GOT7 BamBam၏ YouTube channelမှာ 1.07သန်း Subscribers၊video 72ပုဒ် ၊viewပေါင်း 75သန်းနှင့် ဝမ်1.69ဘီလီယံ(ကန်ဒေါ်လာ 1.45သန်း)ရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
4.SEVENTEEN SEVENTEEN၏ YouTube Channelမှ Subscribers 6.84သန်း၊video880နှင့် Viewပေါင်း 2.147သန်းရရှိထားပြီးယခုနှစ်အတွက် ဝမ် 1.92ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 1.65သန်း)ရရှိကြောင်း သိရသည်။
3.NCT DREAM NCT DREAM channelမှာလည်း Subscribers3.94သန်း၊video233ပုဒ်၊view393.2သန်း ရရှိထားပြီး ယခုနှစ်တွင် ဝမ် 2.10ဘီလီယံ(ကန်ဒေါ်လာ1.81သန်း)ရရှိကြောင်း Forbes Koreaမှ ဖော်ပြထားသည်။
2. BLACKPINK BLACKPINK၏YouTube channel(BLACKPINK)မှာလည်း subscribers 64.5သန်း၊video 372ပုဒ်၊စုစုပေါင်း ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 19ဘီလီယံအထိရရှိထားပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ဝမ် 13.5ဘီလီယံ(ကန်ဒေါ်လာ 11.6သန်း)ရရှိကြောင်း သိရသည်။
1.BANGTANTV BTS၏YouTube channel (BANGTANTY)မှာ 57သန်းကျော်သော subscribers၊ video 1586ပုဒ် ၊ကြည့်ရှုမှုပေါင်း 12ဘီလီယံနှင့် ယခုနှစ်တွင် ဝမ်ပေါင်း19.1ဘီလီယံ (ကန်ဒေါ်လာ 16.4သန်း)ရရှိပြီး နံပါတ်(၁)ဝင်ငွေအများဆုံး Channelအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း Forbes Korea၏ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
ကဲ့ပရိတ်သတ်တို့ရော ဘယ်သီးချင်းကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သလဲ အောက်က commentsလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါအုံးနော်
“Natural High” albumဖြင့် ပွဲဦးပြန်ထွက်လာမယ့် Rapper Nafla
BTS Jimရဲ့ “Moon”သီချင်းဟာ “MOTS7” Albumအတွက် Spotifyတွင် 100M streamရရှိခဲ့တဲ့ တတိယအပုဒ်ဖြစ်လာ
Aug 31, 2021 One Daily Media
BTOB အဖွဲ့၏ Comeback တွင် အဖွဲ့သားတွေကို Instagram ကနေ ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ စစ်မှုထမ်းအဖွဲ့ဝင် Yook Sungjae